“Shiftaan hidhame, miidhame jechuun hiika hinqabu…kan karaa biraan dhufuuf Qawweedhaan deebii laanna” Yaadni jedhu Muummicha Ministeeraa Xoophiyaa Dr. Abiyyi biraa dhagaa’amaa jira. | QEERROO
August 8, 2019 August 8, 2019 / Qeerroo
Natti dhagaa’ame. Dubartii ulfatu hidhamaa jira. Haadhaaf daa’ima addaan baasanii Harma irraa kutanii haadha mana hidhaa kahaa jiru. Dubartiin ulfi eessatti shiftite?.
Qabeenya Qote bulaa Oromoo gubataa jira. Kana itti gaafatamaan Liigii dargaggoo KFO obbo Addisuu Bullaallaa VOA Afaan Oromoo‘f yaada laatee jira. Uummatni Oromoo Gujiis waraana mootummaa himataa jira.
Muummicha Ministeeraa Dr. Abiyyi Ahemad faa, balbala Dimokiraasii banan jedhamanii abdataman. Balballi dimokiraasii banamuu jechuun uummataaf maqqa hinmalle moggaasuu miti. Balballi dimokiraasii banamuu jechuun, Mormitoota farrajuu miti. Dirreen dimokiraasii erga bal’atee jiraatee namuu akka itti dhagaa’ametti yaada isaa karaa nagaa haa ibsatu kan jedhu Dimokiraasii yoo ta’u heraaf seera biyyattiin raggaasifamee jira.
Afaan Qawween hindeemnu jechaa, afaan Qawween deebisaa jirra jechuun maal jedhama?